IT Assistant | Adventure Myanmar Tours and Incentives ﻿
11.9.2019, Full time , Tourism / Travel
Company: Adventure Myanmar Tours and Incentives
This is our Company information and Travels & Tours information of Myanmar.
•	Be familiar with technology and different software
•	Able to code and assist with the programs within the company
•	Fast learner with confidence
•	Graduate withadegree with technology (Computer Science)
•	An experience in IT for more than2years
Work location No.27 , Inya Myaing Street ,Bahan ,Yangon
96 Days, Full time , Tourism / Travel
•	Knowledge of computer networking systems and computer hardware and is essential •	IT assistants also troubleshoot network systems and computer hardware and make repairs when necessary •	Information technology assistants install, maintain and operate the computer network for business.
•	Be familiar with technology and different software •	Able to code and assist with the programs within the company •	Fast learner with confidence
•	မြို့တွင်း/ မြို့ပြင် ကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနှင်နိုင်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။
•	အင်္ဂလိပ်စာ4Skills ကောင်းမွန်စွာပြောဆိုရေးသားနိုင်ရမည်။ •	Microsoft Office Software ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရပါမည်။ •	တခြားဘာသာစကားတစ်ခုခုကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုရေးသားနိုင်သူ ဦးစားပေးမည်။
•	Microsoft Office Software ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရပါမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိရမည်။
•	အလုပ်အတွက် အချိန်ပေးနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။လိုအပ်ပါကခရီးသွားနိုင်ရမည်။ •	Creative Idea ကောင်းရှိရမည်။
•	ကွန်ပြူတာအား အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာလုံးကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ပြီး MS Office, Excel, Word, Power Point တို့ကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရပါမည်။ •	အချိန်အခါမရွေး ခရီးထွက်နိုင်သူနှင့် အချိန်ပိုလုပ်ကိုင်� ...
IT Assistant IT/ Computing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Adventure Myanmar Tours and Incentives IT/Computing Jobs IT/Computing Jobs Tourism / Travel Jobs in Myanmar, jobs in Yangon